Qabashada Soosaarayaasha Soosaarayaasha - Shiinaha Shirkadaha Wax Ka Qabta & Warshad
Taxanaha 'Motoman GP' waa aalado isdaba-joog ah oo xawaare sare ku shaqeeya oo bixiya culeysyo gaaraya 7 illaa 600 kg.
Dejinta fudud iyo dayactirka iyo qaabdhismeedka curcurka oo leh iska caabbinta bey'adeed oo weyn waxay hagaajineysaa hufnaanta rakibidda, hawlgalka iyo dayactirka qalabka.
Ku YASKAWA MOTOMAN-GP50 robot raritaan iyo dejin wuxuu leeyahay culeyska ugu badan ee 50Kg iyo ugu badnaan 2061mm. Iyada oo loo marayo shaqooyinkeeda hodanka ah iyo qaybaha muhiimka ah, waxay la kulmi kartaa baahiyaha adeegsadayaal fara badan sida qaybo badan oo ka mid ah qabashada, duubista, isku imaatinka, shiidi, iyo farsamaynta
YASKAWA MAXAAD U QAADISAY ROOBTII MOTOMAN GP165R
YASKAWA DHAQAALAHA DHALASHADA MOTOMAN GP165R wuxuu leeyahay culeyska ugu badan ee 165Kg iyo xaddiga ugu sarreeya ee firfircoon ee 3140mm.
YASKAWA DHAQAALAHA ROBOT MOTOMAN-GP180
YASKAWA DHAQAALAHA ROBOT MOTOMAN-GP180 khalkhalgelinta maaraynta guud ee waxqabadka, 6-dhidib robot isku-dhafan oo isku-dhafan, waxay qaadi kartaa culeyska ugu badan ee 180Kg, iyo ugu badnaan dhaqdhaqaaq dhan 2702mm, oo ku habboon YRC1000 kabadhada xakamaynta.
Qabashada Gacanta Robot, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, Robotka Gacanta otomaatiga ah, 6 Axis Qabashada Robot, Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta,